ဂျာမန် Portillo | | Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်, ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ democr ကိုဒီမိုကရေစီသို့ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်စွမ်းအင်ပုံစံကိုပြောင်းလဲရမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘာစီလိုနာကဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စျေးကွက်တစ်ခု entity လွမ်းတယ် 130 သည်အထိ 2019 သန်းယူရို ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များမှတဆင့်ရရှိသောအများပြည်သူစွမ်းအင်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုကိုယ်တိုင်စားသုံးရန်နှင့်အသုံးမပြုသောပိုလျှံသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ထည့်သွင်းရန်အဆိုပြုထားသည်။
Eloi Badia၊ ဘာစီလိုနာစီးတီးကောင်စီ၏စွမ်းအင်ကောင်စီမှစွမ်းအင်မော်ဒယ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဘတ်ဂျက်ယူရိုသန်း ၁၃၀ ၏ပမာဏကိုအတည်ပြုသည်။ 76 သန်း သူတို့ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေး entity အလုပ်လုပ်သောအဆောက်အ ဦး များပြန်လည်ထူထောင်ရန်နိုင်လတ်နေကြသည်။ အခြားသူများ 32 သန်း ယူရိုကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သောစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲမြှင့်တင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအားဖြင့် 8.4 သန်း စွမ်းအင်ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
Janet sanz, ဒုတိယမြို့တော်ဝန်, စွမ်းအင်မော်ဒယ်၌ဤပြောင်းလဲမှု၏ရည်မှန်းချက်များ 18% အားဖြင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များမှဒေသခံစွမ်းအင်ပမာဏကိုနှစ်ဆရောက်ရှိနိုင်ဖို့, ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်, ခုခံကာကွယ်ခဲ့သည် နှင့်တစ်ခုလုံးအဖြစ်အားဖြင့်လျှော့ချပါ တစ်မြို့လုံး၏စုစုပေါင်းစားသုံးမှု 10%.
ဒီစွမ်းအင်မော်ဒယ်သစ်ကိုလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးမျိုးကိုစဉ်းစားရမည်။ ခေါင်မိုးများငှားရမ်းခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများ၏ပူးပေါင်းမှုကိုရှာဖွေလိမ့်မည်ဟု Badia ကအာမခံသည်။ ငှားရမ်းထားသောခေါင်မိုးများနှင့်အတူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်ရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဆောက်အ ဦး များပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမည်ဖြစ်ပြီးထုတ်လွှတ်မှုသုညဖြစ်စေရန်နှင့် LED နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အလင်း၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုများစွာလျော့ကျစေသည်။
Sanz သည်ဗဟိုအစိုးရအားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များအပေါ်လောင်းကြေးမတင်ကြောင်းနှင့်စွမ်းအင်မော်ဒယ်ပြောင်းလဲမှုကိုအတည်ပြုသည်ဟုဝေဖန်ခဲ့သည် တိုးတက်မှုတစ်ခုသာမကလူတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » ဘာစီလိုနာသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များအတွက်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မှသာထောက်ပံ့သောမြေထဲပင်လယ်အတွင်းပထမ ဦး ဆုံးကျွန်း